China Pumpkin ukunkcenkceshela can mveliso kunye nabenzi | Iglasi yaseHonghui
UYILO LWE-RETRO-La manzi anokuyilwa kwe-retro kunye nokuvuna okunokuhombisa kwaye kufezekise igadi yakho.
ISITYILI SEBOMFUYO - tyala umniniso uyilo lwethanga ngombala owahlukileyo.
NOZZLE Adjustable - atomization Good, ngemilomo kuhlengahlengiswe, uyakwazi ukutshiza inkungu okanye umgca ngqo.
UYILO OLUPHELELEYO LOMNOTHO-Uza nombhobho weplastiki omde, ekuvumela ukuba unkcenkceshele izityalo ezincinci ngokulula.
ISICELO ESIBALULEKILEYO-Silungele zonke iimfuno zekhaya lakho kubandakanya ukucoca, ukutyala, iimveliso zokucoca, iioyile ezifanelekileyo, ukuchitha izityalo kunye neentyatyambo, amagqabi aphosakeleyo kunye nokucoca iifestile. kunye nezinye izinto ezininzi ezisetyenziswayo.
ISITayile sempompo: Le bhotile yokutshiza iyilelwe ngemilo entle yethanga kunye nempompo ephezulu yeediliya. Uyilo lwemilomo emide kunye ne-atomization elungileyo, ungafafaza inkungu yamanzi ngokucinezela i-gent.
IZINTO EZINOKUQHUBEKA: Zenziwe ngePP kunye nezinto zePET, ezilula kwaye zomelele, akukho lula ukuzaphula. I-Retro yokuxelisa ibha yoxinzelelo lobhedu, inkangeleko entle, elula ukuyisebenzisa.
KULULA UKUSETYENZISWA: Le bhotile yokutshiza inesiphatho somnwe esifanelekileyo kwaye inokugcwaliswa ngokulula ngokususa umphezulu. Ungafafaza inkungu yamanzi ngokucinezela, kulula ukutshiza izityalo ezincinci.
ISICELO ESIBALULEKILEYO: Kulungile ukunkcenkceshela izityalo zangaphakathi, ezinje ngezityalo ezinamanzi, iiferns, iiorchid, izityalo zomoya, nazo zilungele iimfuno zekhaya lakho kubandakanya ukucoca, iinwele, njl njl.
Izixhobo zokunkcenkceshela iAntique Izityalo Zokutyala Iziqhamo Iintyatyambo zeGlasi Izixhobo zokwenza izixhobo eziphathwayo Ubuhle obunokuphinda buhlaziyeke ibhotile yezixhobo zokuhamba izityalo Mini Izityalo Iintyatyambo Igadi yokutshiza iglasi yeglasi isixhobo sokunkcenkceshela.
Imilo entle yethanga, encinci kwaye elula, ungafafaza inkungu, Ukunkcenkceshela iintyatyambo kunye nokunkcenkceshela izityalo ukwenza ubomi bube ngcono.
Uyilo lweketile yoxinzelelo lwe-hydraulic, ekulula ukuyisebenzisa. I-Retro yokuxelisa ibha yoxinzelelo lobhedu, inkangeleko entle, kulula ukuyisebenzisa, Cofa ukutshiza amanzi, ukutshiza okucocekileyo, ayizukunkcenkceshela kakhulu, inokuhlengahlengisa uxinzelelo lwamanzi, kulula ukuyisebenzisa kwaye kulula.
Ilungele ukunkcenkceshela izityalo ezincinci ngaphakathi kwekhaya lakho nakwiofisi. I-Cute Retro Pumpkin Shape Iglasi yokuNkcenkceshela iglasi Ibhotile yeBhotile yeglasi Isitshizi sokutshiza Izityalo ezintle Iintyatyambo zeglasi Iglasi ye-Pot retro ithanga lokuma isitshizi sokunkcenkceshela imbiza yesandla sokutshiza ibhotile yeentyatyambo.
Egqithileyo I-origami vase
Okulandelayo: Iindlebe zokufakwa ngaphakathi okanye ibhotile
Iglasi yeentyatyambo yevazi
Ukuhonjiswa kweglasi yevase
Iglasi enkulu yevazi
IiVesi zeGlasi ezinde
Iindlebe zokufakwa ngaphakathi okanye ibhotile